Loharano niova: inona izany, tsy fitoviana amin'ny tsipika, ary inona no | Fitaovana maimaim-poana
Loharano niova: inona izany, tsy fitoviana amin'ny tsipika, ary inona no ilana azy
Isaac | 01/10/2021 09:00 | Nohavaozina amin'ny 07/09/2021 09:52 | Fitaovana elektronika
Una loharano niova dia fitaovana elektronika afaka manova angovo herinaratra amin'ny alàlan'ny andian-dahatsoratra singa elektrika, toy ny transistors, ny regulator voltre, sns. Izany hoe, a famatsiana herinaratra, fa miaraka amin'ny tsy fitoviana manoloana ireo tsipika. Ireo loharano ireo dia fantatra koa amin'ny hoe SMPS (Famatsiana herinaratra maody), ary ampiasaina amin'ny fampiharana marobe ...
1 Inona no atao hoe famatsiana herinaratra
2 Loharano Linear vs loharano niova: fahasamihafana
4 Karazana loharano
Inona no atao hoe famatsiana herinaratra
Una famatsian-herinaratra, na PSU (Fitaovana famatsiana herinaratra), dia fitaovana ampiasaina hanaterana herinaratra mifanaraka amin'ny singa na rafitra samihafa. Ny tanjon'izy ireo dia ny fandraisana ny angovo avy amin'ny tamba-jotra elektrika ary hanova izany ho lasa voltatera sy fantsom-pifandraisana mifanaraka amin'izany mba hahafahan'ny mpiorina mifandray miasa tsara.
Ny famatsiana herinaratra dia tsy hanova ny tanjaky ny fivoahany raha oharina amin'ny fidirana ao aminy, fa afaka manova ny hamafiny koa, ahitsy ary ampioreno manova avy amin'ny arus ankehitriny mifandimby mankany amin'ny ony mivantana. Izay no mitranga amin'ny loharanom-PC, ohatra, na amin'ny adaptatera handefasana bateria. Amin'ireny tranga ireny, ny CA dia hiala amin'ny 50 Hz mahazatra sy 220 / 240v, mankany DC amin'ny 3.3v, 5v, 6v, 12v, sy ny sisa ...
Loharano Linear vs loharano niova: fahasamihafana
Raha tadidinao ny adaptatera na charger amin'ireo telefaona antitra, lehibe kokoa sy mavesatra kokoa izy ireo. Ireo dia famatsiana herinaratra mivantana, raha ny maivana sy maivana kokoa kosa ankehitriny dia mifindra herinaratra. Ny tsy fitoviana:
Ao amin'ny endritsoratra tsipika ny fihenan-tsofin'ny herinaratra dia ahena amin'ny alàlan'ny mpanova, mba hanitsiana andriamanitra avy eo. Izy io koa dia hanana dingana hafa miaraka amin'ny capacitors electrolytic na stabilizers hafa. Ny olana amin'ity karazana mpanova ity dia ny fahaverezan'ny angovo amin'ny endrika hafanana noho ny fanovana. Ho fanampin'izany, ity mpanova ity dia tsy vitan'ny vy mavesatra sy matevina fotsiny, fa ho an'ny onja avo lenta kosa dia mila familiana tariby varahina matevina izy ireo, ary mampitombo ny lanjany sy ny habeny koa.
ny loharanom-pahalalana nafindra Mampiasà fitsipika mitovy amin'izany amin'ny fizotrany izy ireo, saingy misy fahasamihafana. Ohatra, amin'ireto tranga ireto dia ampitomboin'izy ireo ny fatran'ny onja ankehitriny, manomboka amin'ny 50 Hz (any Eropa), hatramin'ny 100 Khz. Midika izany fa mihena ny fatiantoka ary mihena be ny haben'ny mpanova, ka ho maivana kokoa izy ireo ary hikambana kokoa. Mba hanatanterahana izany dia ovainy ho DC ny AC, avy eo DC mankany AC misy hafanana hafa noho ilay voalohany, ary avy eo novainy hoe DC hiverina any DC.
Androany, ny famatsiana herinaratra mivantana dia azo atao nanjavona izy ireo, noho ny lanjany sy ny habeny. Ankehitriny ny switch dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny karazana fampiharana rehetra.
Noho izany, ny zava-nisongadina miankina amin'ny fomba fiasa fototra izy ireo:
El habe sy lanjany amin'ireo tsipika dia mety misy dikany, miaraka amin'ny 10 kg amin'ny tranga sasany. Raha ireo navadika, ny lanjany dia mety tsy ho grama vitsivitsy.
Amin'ny tranga Volapoky famoahana, loharanom-pahalalana mifehy ny vokatra amin'ny alàlan'ny voltages ambony kokoa amin'ny dingana teo aloha ary avy eo mamokatra voltages ambany amin'ny vokatra avoakany. Raha ny maody mifamadika dia mety hitovy izy ireo, ambany, ary avadika mihitsy aza noho ny an'ny fidirana, ka mahomby kokoa izy.
La fahombiazana sy fanaparitahana Tsy mitovy koa izy io, satria mahomby kokoa ireo navadika, mampiasa angovo tsara kokoa, ary tsy manaparitaka hafanana be loatra, ka tsy mila rafi-pitabatabana lehibe toy izany.
La pitsiny somary avo kokoa izy io amin'ny switch noho ny habetsaky ny dingana maro.
Ny endritsoratra tsipika dia tsy mamokatra fitsabahan'ny amin'ny ankapobeny, ka izy ireo no tsara indrindra rehefa tsy tokony hisy ny fanelingelenana. Ilay navadika dia miasa amin'ny alim-pandihizana avo kokoa, ary izany no antony tsy dia tsara amin'izany.
El herin'ny hery ho an'ny loharano linear dia ambany, satria ny herinaratra dia nalaina avy tamin'ny tsipika voltage tamin'ny tsipika herinaratra. Tsy izany no izy amin'ireo niova fo, na dia nampiana dingana teo aloha aza mba hanitsiana betsaka ity olana ity, indrindra amin'ny fitaovana amidy any Eropa.
Hahafantatra tsara ny fiasan'ny loharanom-baovao, ny dingana samihafa dia tsy maintsy esorina ho toy ny sakana, toy ny hita amin'ny sary teo aloha. Ireto sakana ireto dia manana ny asany manokana:
Sivana 1: tompon'andraikitra amin'ny famongorana ny olan'ny tambajotra elektrika toy ny tabataba, ny tononkira, ny transients sns. Izany rehetra izany dia mety hanelingelina ny fiasan'ny singa mandeha amin'ny herinaratra.
Mpanafatra: ny asany dia ny fisorohana ny ampahany amin'ny fambara sinusoida mandalo, izany hoe mandalo amin'ny lalana iray fotsiny ny riaka ankehitriny, ka miteraka onja miendrika polipitra.
Fanamafisana ny tanjaka: raha toa ka tsy misy dingana intsony ny ankehitriny momba ny herinaratra, dia tsy hampiasaina tsara ny herin'ny tambajotra, ary mamaha ity olana ity ity mpampitohy ity.
Condenser- Ny capacitor dia hampihena ny signal pulsa mivoaka amin'ny dingana teo aloha, mitahiry ny fiampangana azy ary mahatonga azy hivoaka misimisy kokoa, toy ny signal tsy tapaka.
Transistor / Controller: izy io dia toy ny fanaraha-maso ny fandehanan'ny ankehitriny, manapaka ary mampihetsika ny làlana, izay manova ny onja saika fisaka teo aloha ho lasa mikotrika. Ny zava-drehetra dia hofehezin'ny mpanara-maso, izay afaka mihetsika ho toy ny singa fiarovana.
mpanova: mampihena ny herinaratra amin'ny fampidirany azy mba hampifanaraka azy amin'ny tady ambany (na voltages ambany kokoa) amin'ny fivoahany.
Diode: hivadika ny onja mifandimby mivoaka avy ao amin'ny mpanova ho lasa mandeha be izao.
Sivana 2: miainga avy amin'ny riaka mikitoantoana hatrany amin'ny indray mitohy.
Optocoupler: hampifandray ny fivoahan'ny loharano sy ny faritra misy ny fanaraha-maso ho an'ny fitsipika marina, karazana tamberina.
Ireo loharano niova dia azo sokajiana ho efatra karazana fototra:
Fahan'ny AC / DC output: Izy io dia misy rectifier, commutator, transformer, output rectifier ary sivana. Ohatra, ny famatsiana herinaratra PC.
Fahan'ny AC / output AC: ahitana inverter matetika sy mpanova hatetika fotsiny izy io. Ohatra iray amin'ny fampiharana dia ny fiara elektrika elektrika.
DC input / AC output: Fantatra amin'ny hoe mpampiasa vola izy io, ary tsy dia matetika toy ny teo aloha izy ireo. Ohatra, izy ireo dia azo jerena amin'ny mpamorona 220v amin'ny 50Hz avy amin'ny bateria.
DC input / DC output: voltatera na mpanova ankehitriny. Ohatra, toy ny charger bateria sasany ho an'ny finday ampiasaina amin'ny fiara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » Loharano niova: inona izany, tsy fitoviana amin'ny tsipika, ary inona no ilana azy